अध्ययन : उहानमा १९ दिनभित्र कोरोना संक्रमित ५ लाख पुग्न सक्ने, मृत्यु हजार नाघ्यो, ‘सार्स’भन्दा निकै अघि – Health Post Nepal
२०७६ माघ २८ गते १४:२५
चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढिरहेको छ । यो महामारीका कारण चीनमा हालसम्म १ हजार १६ जनाको ज्यान गइसकेको छ जब कि ४२ हजार ६ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । चीनबाहेक २८ देशमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने फिलिपिन्स र हङकङमा एक–एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
सोमबार मात्र चीनमा १०८ संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जसमा हुबेईका १०३ जना छन् । यो २४ घण्टामा २ हजार ४ सय ७८ जनामा नयाँ संक्रमित फेलापरेका छन् । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार हालसम्म जममा ३ हजार ९ सय ९६ जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
यसैबीच, फेब्रुअरीको अन्तसम्म चीनको सबैभन्दा बढी प्रभावित सहर उहानमा कोरोना भाइरसले ५ लाख मानिसलाई संक्रमित गराउन सक्छ । बेलायतको लन्डनमा भएको यो अध्ययनमा हालसम्मको संक्रमणको अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ ।
लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनले प्रत्येक दिन संक्रमित हुनेको आँकडा अध्ययन गरेको छ । यति मात्र होइन, उसले कोरोना भाइरस फैलिने तरिकाबारे पनि अध्ययन गरेको छ ।
‘संक्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्यौँ भने फेब्रुअरीको अन्तसम्म उहानमा प्रभावित व्यक्तिको संख्या निकै बढ्नेछ,’ संक्रामक रोग महामारी विज्ञानका प्राध्यापक एडम कुचार्स्कीले भने, ‘यदि संक्रमणको रफ्तार यही गतिमा रह्यो भने फेब्रुअरीको अन्तसम्म उहानको ५ प्रतिशत जनसंख्या यो भाइरसको चपेटामा आउन सक्छ । अर्थात्, १ करोड १० लाख जनसंख्याको सहरका ५ लाख मानिस संक्रमित हुन सक्छन् ।’
संक्रमणको गति सुस्त भएमा आँकडा बदलिन सक्छ
भाइरस संक्रमणको डेढ महिनाको ‘ट्रेन्ड’लाई अध्ययन गर्दा फेब्रुअरीको अन्तसम्म उहानका ५ प्रतिशत मानिस संक्रमित हुने डा. कुचर्स्कीको भनाइ छ । यद्यपि, केही दिनमा संक्रमणको गति सुस्त भएमा भने आँकडा बदलिने उनी बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा उहानका २० मध्ये १ मा भाइरसको संक्रमण हुनेछ,’ प्राध्यापक कुचर्स्कीले भने, ‘यदि आगामी २० दिनमा संक्रमणको गति सुस्त भएमा भने आँकडा फेरिन सक्छ ।’
सार्सलाई उछिन्यो, कैयौँ गुणा बढी क्षति गर्ने निश्चित
२००२–०३ मा फैलिएको सार्स भाइरसको तुलनामा अहिलेको कोरोना भाइरसले धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । चीनबाटै सुरु भएको सार्सको संक्रमण विश्वका १७ देशमा फैलिएको थियो । विश्वभर ७७४ जनाको ज्यान गएको थियो भने कुल ८ हजार ९६ जना संक्रमित भएका थिए । चीनमा सार्स संक्रमणबाट ३४९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
४२ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसक्दा एक महिनामा ४ हजारभन्दा पनि कम संक्रमितले मात्र स्वास्थ्यलाभ गर्नु र सम्पूर्ण प्रयासका बाबजुद दैनिक साढे २ हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिनुले संक्रमण र मृत्यु दुवै हिसाबले नयाँ नेवेल कोरोना भाइरसले सार्सभन्दा कैयौँ गुणा बढी क्षति पुर्याएउने निश्चित भएको छ । विश्वका देशमा फैलावटका हिसाबले पनि यो भाइरसले सार्सभन्दा दोब्बर भूभागलाई प्रभावित बनाइसकेको छ ।
चिनियाँ अधिकारी भन्छन् : कोरोना भाइरसले हावामा ‘एयरोसिस’ बनाइसकेको छ
उता सांघाई सिभिल अफेयर्स ब्युरोका उपप्रमुखले खुलासा गरेका थिए कि– कोरोना भाइरसले अब हावामा विद्यमान सूक्ष्म बुँद (पानीको सूक्ष्म थोपा)मा टाँसिएर ‘एयरोसोल’ बनाइरहेको छ, यसैका कारण यसको फैलने गति पनि बढिरहेको छ ।’
हुबेईमा ६ करोड मानिस घरमा कैद
कोरोना महामारीका कारण २३ जनवरीदेखि हुबेई प्रान्तको उहान सहरलाई लकडाउन (बन्द) गरिएको छ । उहानका करिब १ करोड १० लाख मानिस घरमा कैद गरिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित उहान र हुबेईका अन्य सहरमा कोरोना भाइरसले हुने निमोनियाबाट बचाउका लागि के उपाय अपनाइँदै छ भन्ने जान्न चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीसहित समग्र विश्व उत्सुक छ । हुबेईमा मात्र करिब ६ करोड मानिस घरमा कैद छन् । उहानसँगै चीनका करिब ३ दर्जन सहर बन्द गरिएको बताइएको छ ।
कोरोना संक्रमणपछि पहिलोपटक जनतामाझ निस्किए राष्ट्रपति सी जिनपिङ
कोरोनाको संक्रमण सुरु भएको करिब डेढ महिनामा राष्ट्रपति सी जिनपिङ सोमबार पहिलोपटक जनतामाझ निस्किएका छन् । चीनको स्टेट मिडियाका अनुसार राष्ट्रपति सीले भाइरस फैलिनबाट रोक्न बोइजिङमा कार्यकर्ताले गरेको प्रयासको निरीक्षण गरेका छन् । उनले एक स्थानीय अस्पतालको अनुगमन निरीक्षणसमेत गरेका छन् । उनले सोमबार नै उहानका मेडिकल स्टाफसित भिडियो वर्तासमेत गरेको स्टेट मिडियाले जानकारी दिएको छ ।
डब्लुएचओको चिकित्सा विशेषज्ञ टोली चीनमा
नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमणको जाँचमा मद्दत गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को चिकित्सा विशेषज्ञ टोली सोमबार राति चीन पुगेको छ । डा. ब्रुस अलवार्ड नेतृत्वको डब्लुएचओको विशेषज्ञ टोलीलाई चीनले स्वागत गरेको छ ।
‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीको चीनमा स्वागत गर्दछौँ,’ चीनको नेसनल हेल्थ कमिसनका एक अधिकारीले भने ।
चीन र डब्लुएचओको विशेषज्ञ टोलीबीच कोरोना भाइरसका विषयमा गहन चर्चा गर्ने र थप महामारी फैलिनबाट रोक्न उचित कदम उठाउने बताइएको छ ।
पछिल्लो १५ दिनमा संक्रमितको अवस्था (१०० मा शून्यान्तर)
जनवरी २८ – ६,०००
जनवरी २९ – ७,७००
जनवरी ३० – ९,७००
जनवरी ३१ – ११,२००
फेब्रुअरी १ – १४,३००
फेब्रुअरी २ – १७,२००
फेब्रुअरी ३ – १९,७००
फेब्रुअरी ४ – २३,७००
फेब्रुअरी ५ – २७,४००
फेब्रुअरी ६ – ३०,६००
फेब्रुअरी ७ – ३४,१००
फेब्रुअरी ८ – ३६,८००
फेब्रुअरी ९ – ३९,८००
फेब्रुअरी १० – ४०,२००
फेब्रुअरी ११ – ४२,६००
कुन देशमा कति पुगे संक्रमित ?
दक्षिण कोरियामा २७
जर्मनी र भियतनाम १४–१४
बेलायत र युएई ८–८
इटली, फिलिपिन्स र भारत ३–३
स्पेन र रुस २–२
नेपाल, कम्बोडिया, बेल्जियम, फिनल्यान्ड, स्विडेन, श्रीलंका १–१